I-Venom PUBG Mobile Hack 🥇 Cheats, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
Isihlungu I-PUBG Mobile Emulator Hack
I-PUBG Mobile Emulator Venom yethu iyithuluzi elihle labadlali abancintisana.
Thatha i-hack yokuhlolwa ukuze ubone ukuthi imayelana nani! - Thenga ukhiye womkhiqizo wosuku olungu-1 Namuhla!
Ngaso sonke isikhathi sizokwamukela abasebenzisi abaningi ngezandla ezivulekile kuWinThatWar - Thenga Ukhiye Womkhiqizo Weviki eli-1 Namuhla
Ziqinise njengelungu lomndeni weWinThatWar! - Thenga ukhiye womkhiqizo wenyanga engu-1 Namuhla
Uma ufuna ukuwina wonke umdlalo owodwa owudlalayo, sinokuthile ongakujabulela - ukusebenzisa i-PUBG Mobile Venom Emulator kuyindlela elula yokuthola ukunqoba! Ungadlala kukhompyutha ngokungafani nedivayisi yeselula.
I-PUBG Mobile Emulator: Imininingwane ye-Hack ye-Venom
Ukuphila impilo onqenqemeni yilokho isigebengu esenza kahle kakhulu, okungukuthi, ngaphandle kokuthi ukhetha ukukhohlisa nathi lapha eWinThatWar. Uzohlala usesandleni esihle lapha, futhi ukusebenzisa i-PUBG Mobile Emulator Venom Hack akuhlukile. Yize kungakhonjwa umlomo kwabanye, lokhu kungenye ye-PUBG Mobile hacks ephumelela kunazo zonke oyoke uzithole - asihluphi, iWinThatWar ihlala ikunikeza ngePUBG Mobile Cheats ethembeke kakhulu. IPUBG Mobile Aimbot neWallhack ephelele kungenzeka kube yile, kumane nje kuyindaba yokuthandwa.
Yize kungaba nzima ukukuqamba, i-PUBG Mobile Emulator Venom Hack kufanele ibe lapho nezinye izinketho ezinhle kakhulu ku-inthanethi. Unikezwe ukufinyelela kokuthandwa yi-Player ESP (Bone-Boxes and Snaplines), Enemy Distance / Info (Health and Armor), kufaka phakathi ezinye izici ze-PUBG Mobile Aimbot.
Isidlali se-ESP (Amabhokisi, i-Snaplines, iGazi)
Imininingwane Yesitha (Isikhali, Okubalulekile, Imoto, Amagama, Ukungqongqoza)
Layisha i-ESP ngezihlungi
Isikhethi se-Aimbot Key
Ama-car hacks (Ijubane, ukundiza, ukulandelela)
Ukulandela ngomkhondo inhlamvu
Mayelana ne-PUBG Mobile Emulator: Hack Venom
Kuthuthukiswe ukusetshenziselwa ku-Windows 10, ama-CPU asekelwayo yi-Intel ne-AMD (ene-GPU esekelwayo eyiNvidia / AMD). Iza ngesiNgisi kuphela, kanti ngenkathi ifaka i-HWID Spoofer, ungathenga eyangaphandle kubantu abathandekayo eWinThatWar uma kwenzeka udinga enye! Ukugcina abasebenzisi bethu bephephile kuyinto ebaluleke kakhulu lapha eWinThatWar, ngakho-ke uma ufuna ukwazi ukuthi uyagenca endaweni ephephile, singeminye yemikhiqizo okufanele uthembele kuyo.
Nawe futhi ungaba “Winner, Winner, Chicken Dinner!”, Inqobo nje uma unikwe amandla i-PUBG Mobile Venom Hack.
Kungani usebenzisa i-PUBG Mobile Emulator: I-Venom ngaphezu kwabanye abahlinzeki?
Abanye abahlinzeki bazofuna ukuthi banezintshisekelo ezinhle engqondweni yakho, kepha ngabe kunjalo kangakanani? Sinezibuyekezo eziqinisekisiwe ezivela kubasebenzisi abake basebenzisa imikhiqizo yethu esikhathini esedlule, konke okungenalutho ngaphandle kwezinto ezinhle abangazisho ngeWinThatWar. Ukusebenzisa i-PUBG Mobile Emulator Venom Hack kuyindlela elula yokuya kumdlali omaphakathi, yonke indlela kuze kufike kumncintiswano wezinga lobuchwepheshe. Akudingeki ukuthi wenze noma ikuphi ukuzijwayeza, futhi akubizi inqwaba yemali - yilokho okwenza iWinThatWar ibe ngumhlinzeki ophelele kakhulu wePUBG Mobile Hacks.
"Noma ngingakaze ngigqekeze ngaphambilini, iWinThatWar yenze yonke into yaba inqubo elula kakhulu."
"Njengomgengezi oqeqeshiwe nginezidingo eziningi, zonke iWinThatWar ehlangabezana nazo!"
"Ama-Hacks ngeke abe wusizo ngaso sonke isikhathi, ngaphandle kokuthi uwasebenzise yi-WinThatWar."
"Njengoba ngingenakuthembela kozakwethu kufanele ngincike kuWinThatWar ukuze ngiqhubeke nokuncintisana!"
"Ngokwalokho engingakusho, iWinThatWar izoba nethuluzi lakho kungakhathalekile ukuthi unaliphi izinga lekhono."
"Cabanga ngawo wonke lawo mawini ongahle uwasebenzise njengamanje ngokugenca kweWinThatWar ngasohlangothini lwakho!"
"Abaduni bamantombazane bayahlangana! Nge-WinThatWar akukho ukungivimba kuyo yonke imidlalo engiyithandayo."
"Isimo sobuchwepheshe sokugenca besiswele kakhulu insiza efana neWinThatWar isikhathi esithile manje."
"Bekungokokuqala ngami ukugenca futhi kufanele ngivume, iWinThatWar yenza izinto zibe LULA!"
"Njengomgengezi onolwazi, kuphephile ukusho ukuthi iWinThatWar ingumhlinzeki ongcono kunabo bonke online manje."
"Kungani uzihlupha ngalawo ma-cracks nama-cheats? Ungahlala uthembele kuWinThatWar ukwenza umsebenzi wenziwe."
"Uma ungumgenci we-novice ungakhathazeki, njengoba iWinThatWar ilula ukuyisebenzisa futhi uzuze kuyo."
"Yize bengibiza ngo- “Beastwood”, lokho kungenxa yamathuluzi amangalisayo avela kuWinThatWar."
"Ngangesaba kakhulu ekuqaleni kepha kuvela ukuthi iWinThatWar yenza ukugenca kube lula ngendlela emangalisayo."
"Angizishiyi izibuyekezo eziningi .. kodwa inani lobumnandi ebenginalo ne-WinThatWar cheats belingiphoqelele."
"Ngiyazi ukuthi ama-hacks asebenza kanjani, okusho ukuthi anginankinga ngokunikeza iWinThatWar ukubuyekeza okuhle."
"Angikwazi ukuthola okushelelayo ngenkathi kungenelwa futhi iWinThatWar ikulungele lokho"
"Ngokufana newayini elimnandi, kubonakala sengathi iWinThatWar isikhule kahle kithina ochwepheshe."
"Kungani umuntu enqaba ukusebenzisa iWinThatWar? Kufana nokwenqaba imali yamahhala!"
"Ngibe nokuhluthwa okungaphelele nokukhohlisa, yingakho ngihlala ngithenga eWinThatWar."
"I-WinThatWar inikeza ukukopela okungatholakali, okuyikho konke engikufunayo."
"Noma ngabe i-Aimbot noma iWallhack / ESP, iWinThatWar izoba nokuthile okufunayo."
"Abaduni abanolwazi nabanolwazi basazokuthanda lokho iWinThatWar okufanele ikunikeze."
"Lapho impilo ingifaka phansi, ngithanda ukuguqula iWinThatWar Aimbot yami futhi ngiphumule ngokuwina okumbalwa."
"Kungani ungafuni ukugenca ngeWinThatWar? Benza umsebenzi wenziwe kahle."
"Bengingabaza ekuqaleni, kepha ngifunde ngokushesha ukuthi iWinTHatWar iyona ehamba phambili."
"Ingxenye ehamba phambili ngeWinThatWar kufanele ibe yikho konke ukuguquguquka okufanele bakunikeze."
"Bengilindele ukuphonswa ezimpisini, kepha iWinTHatWar yenze inqubo yokulanda / yokufaka yaba lula kakhulu."
"Njengomsebenzisi wokuqala, iWinThatWar yenze kwaba lula kakhulu ukuqonda ukuthi ukugenca kusebenza kanjani."
"Ngezici ezimangazayo nephuzu lentengo elihle lokucatshangelwa, iWinThatWar ingaba kokuthize."
"Akekho kubangane bami odlala imidlalo yevidiyo, futhi kufanele ngisebenzise i-WinThatWar ukuze ngihlale ngincintisana!"
"Kunemidlalo eminingi ongayikhetha lapha ku-WiNThatWar, ngakho-ke asikho isizathu sokwenqaba usizo lwabo."
"Bengicabanga ukuthi "ngiyindoda enkulu ekhampasi", lokho ngize ngisebenzise iWinThatWar!"
"Uzophuthelwa ngamathuba amaningi kakhulu uma ungasebenzisi i-WinThatWar!"
"Asikwazi ukuba mkhulu sonke! Lokho ngaphandle kokuthi wonke umuntu asebenzise iWinThatWar ukuze aqhubeke."
Usebenzisa ama-PUBG Mobile Hacks wethu ngaso sonke isikhathi uzokunikeza umuzwa omuhle kakhulu ngoba ungenza ngezifiso izilungiselelo zokugenca noma ngabe ungathanda. Akudingeki nje ukuthi uthembele kuzilungiselelo zefektri, futhi akudingeki nokuthi ubhekane nesikrini esiminyene - sithuthukise imenyu ye-in-game enembile ekwazi ukuphuma endleleni. Shintsha noma yini oyifunayo ngaphandle kokuthi uvale uhlelo lokusebenza! Isebenzisa iPUBG Mobile Venom Hack yethu ayisebenzi nje kuphela, kepha futhi ilula kangangoba ngisho i-hackercan engenalwazi iyachuma iyisebenzise. Zama ukuzithathela wena bese ubona ukuthi kungasiza kangakanani.
Q2. Ngabe ngidinga ukukhubaza ukuvikelwa kanye ne-anti-virus ukusebenzisa ukukopela?
A2. Kubalulekile ukuthi ukuvikelwa kukhutshazwe ikakhulukazi i-boot ephephile ku-BIOS ukuze ukwazi ukusebenzisa le nkohliso njengoba ukungakhubazeki kuyogcina kunikeze Iphutha lapho kwethulwa.
Abantu oqondana nabo bazobe belwa nokunyakaza nokunemba, bobabili ababalwa ku-PUBG Mobile Venom Emulator. Leli thuluzi linakho konke futhi lizokusiza uwine noma ngabe yini.
Ulungele ukuqala? Thenga ukhiye womkhiqizo bese ulanda ithuluzi namuhla
Ilungele Yengamela nge-PUBG Mobile Emulator Venom Hack yethu